Spider LED Kura Chiedza
SPF-5P / 6P / 8P Uyezve
Yakapetwa LED Kura Mwenje
Quantum LED Kura Mwenje
CREE COB LED Kura Mwenje
Yakasarudzika LED Kura Chiedza
Yakanyanya kukosha metric yemwenje inokura
ne admin pane 21-02-23
Kana iwe wanga uchitsvaga kwakatungamirwa kukura masisitimu ekuvhenekesa emiti yako, iwe ungangodaro wakarohwa nezvakasiyana metric izvo vanogadzira magetsi vanoshandisa pane zvigadzirwa zvavo se: watt, LUX, PAR, PPF, PPFD uye kushanda kwephoton. yemashoko aya relat ...
LED Kura mwenje 'Zvakanakira zvichienzaniswa neyakajairwa mwenje
HPS & HIDI girobhu VS LED inokura mwenje HPS LED KUKURA CHIEDZA KUKUDZA KUREI mwenje simba rakakwira simba, yakakwira enegry yekushandisa 1/2 simba reHPS, yakaderera enegry yekushandisa lifespan 2000-3000 maawa 50000-60000 maawa kushanda chete 80% mwenje inoshanda kune chirimwa, 20 % marara asinga gone ...
Tsanangudzo dzePAR, PPF, PPFD, DLI…
Photosynthetically Active Radiation (PAR) Ichi hachisi chiyero kana "metric" senge tsoka, inches kana kilos. PAR inotsanangura mhando yechiedza chinodiwa kutsigira photosynthesis muhupenyu hwemuti. Photosynthetic Photon Flux (PPF) Chiyero chechiedza chese (mafotoni) anoburitswa nechiedza ...
Basic Mazwi Ose Anokura LED anofanira Kuziva
Ma LED paakasvika pamusika, kugona kwavo kukuru uye kuchengetedza mari vanogona kushandura nzvimbo yekutamba. Lumens, lux, uye tsoka dzekupedzisira dzakapedzisira dzave mashandiro echinyakare ekumisikidza mwenje zvinodiwa kumiti. Munguva pfupi yapfuura, vanhu vakatanga kutaura nezve PAR, PPF, iyo ...
Waterproof LED Kura Chiedza